Izingxenye Zokufakelwa, Izitho Zokufakelwa, Izingxenye Zokufakelwa - I-Wonderfu
Okungaphezulu kwesipiliyoni se-15 kulayini we-proshteic & ortho
24hours * 7days service online
Inkampani yami ibhizinisi lokucwaninga nokuthuthuka lobuchwepheshe obuphakeme, elineminyaka engaphezu kwengu-12 yesipiliyoni sobungcweti ekukhiqizeni nasekuthengiseni izingxenye zokufakelwa nezokuthambekela, ezinjengokwenziwa ngonyawo, izinhlobo zokuhlangana kweqakala, ukuhlangana kwamadolo, ukuhlangana kwe-hip nezinhlobo ze-orthotic ukuhlangana kwamadolo, ukukhiya kweSwitzerland, ukukhiya indandatho, ukukhiya kwangemuva njll.
Ukusizakala kwethu yimikhiqizo yezinhlobo eziphelele, ikhwalithi enhle, intengo enhle kakhulu, insizakalo enhle kakhulu yokuthengisa ngemuva, futhi ngokukhethekile Sinamaqembu wethu Wokuklama Nentuthuko, bonke abaklami bacebile Bacwaningelwa emigqeni yokufakelwa neye-orthotic, Ngakho-ke singanikeza ngokwezifiso ngokobuchwepheshe (insizakalo ye-OEM ) kanye nezinsizakalo zokuklama (isevisi ye-ODM) ukuhlangabezana nezidingo zakho ezihlukile.
Ama-myoelectric arm prostheses anezinga elilodwa le-f ...
I-Myoelectric BE yokufakelwa ngezinga elilodwa le-fr ...
Izitho zokufakelwa zezimonyo zamahlombe ezihlangene ehlombe ...
Izindaba futhi Imicimbi
Kwabasha, ukunganaki empilweni kungaholela kalula kwi-scoliosis. I-Scoliosis yisifo esivame kakhulu ekukhubazekeni komgogodla, futhi ukuvela kwaso okujwayele kubhekise ekugoqeni komgogodla oseceleni okwedlula ama-10 degrees. Yiziphi izizathu ezibangela i-scoliosi ...
Usuku lwesihlanu lwenyanga yesihlanu yenyanga enguMkhosi Wesikebhe Sombhoshongo ezweni lakithi. Ukuphela kosuku, usuku lwesihlanu inombolo ye-yang, ngakho-ke ibizwa nangokuthi "iDuanyang Festival". 1. Imfucumfucu Yesikebhe Se-Boat Rice Dumplings Ukudla amadombolo ngesikhathi seDra ...